Faahfaahin Labadii Qarax Ee ka dhacay magaalada Kampala – Idil News
Faahfaahin Labadii Qarax Ee ka dhacay magaalada Kampala
Posted By: Idil News Staff November 16, 2021
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay, 33 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo Talaadada maanta ah ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda, sida ay sheegeen booliska.
“Illaa iyo hadda waxaa dhaawac ah 33 qof, waxaana 5 ka mid ah ay xaaladdoodu tahay mid daran,” waxaa sidaas yiri afhayeenka booliska Fred Enanga, oo shir jaraa’id qabtay, kaasi oo intaas ku daray inay dhinteen saddex qof oo kale.
Enanga wuxuu sheegay in qaraxyada ay fuliyeen saddex qof oo is-miidaamiyey.
Booliska ayaa sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda Allied Democratic Forces (ADF), oo Mareykanka uu sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish.
Afhayeenka booliska Fred Enanga ayaa sheegay “in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kooxda ADF.”